Now Pail, Kwụ Ọtọ Side Pail, Square ịwụ - SDPAC
Imewe - Nkesa - Teknụzụ
Dai Dong Tien nwere obi ụtọ ịbụ onye ọsụ ụzọ na Teknụzụ - Nwepụta - Nkesa nke ụlọ ọrụ plastik
Changzhou SDPAC Co., Ltd. emi odude ke C5, HUTANG sayensị na Technology Industrial Park, Guangdian East Road, Changzhou City, na mpaghara nke fọrọ nke nta 10000 m2.
Companylọ ọrụ ahụ nwere mkpokọta ego nke nde 20 na isi ndebanye aha nde 10. Bụ a ọkachamara aku nile di iche iche nke elu-edu plastic pail imewe na n'ichepụta ụlọ ọrụ, pụrụ iche-eji nke plastic pails bụ mmepe direction nke m ụlọ ọrụ, anyị nwere 20 ọkachamara na ndị ụlọ ọrụ, mahadum ogo ma ọ bụ n'elu, ugbu a aku enterprise research na mmepe, mmepụta, mma, ahịa, ego na ọrụ ndị ọzọ.
Ọhụhụ ụlọ ọrụ a bụ “ịgba mbọ wuo ewu ewu plastik a ma ama n’ụwa niile” ma guzobe usoro ọdịnala ya pụrụ iche
1. Ndị ahịa: ịnye ngwaahịa na ọrụ dị elu, gosipụta ntụkwasị obi, kwụsie ike, mmekọrịta mmeri.
2. Maka ndị ọrụ: mepụta nkwekọrịta na-arụ ọrụ mmeri ma merie, kwenye, kwado ma nye egwuregwu zuru oke na uru dị iche iche nke onye ọrụ ọ bụla.
3. Iji ọha mmadụ: rube isi n'iwu na ụkpụrụ mba na iwu ụlọ ọrụ, ma guzobe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ, nke ọhụrụ na ekele.
1.3GAL gburugburu agba akwụkwọ nwere mkpuchi
3.5GAL ARLỌ WLỌ PALỌ MGBE AKA
5GAL bọl bọl nwere mkpuchi
3.5GAL bọl bọl nwere mkpuchi
3.3GAL SQUARE PAIL NA-EGO
A na-eji Chen Hsong Group JM MK6 nke kachasị ọhụrụ nke igwe na-azọpụta ọgwụ na-arụ ọrụ na mmepụta na akụrụngwa, yana ọtụtụ usoro nke 120t, 260t, 320t, 650T, wdg, na SINTO brand machine eji dị ka igwe inyeaka: manipulator , Igwe mmiri ice, igwe ntanye, draya, wdg, iji hụ na ngwaahịa a kwụsiri ike.
Ọrụ maka OEMs
Anyị nwere ike inyere ndị ahịa aka chepụta ma mepụta ụdị ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa metụtara ngwaahịa plastik dịka ha si arụ ọrụ. Site n'echiche echiche, na imepụta ngwaahịa, ịkpụzi akpụzi, ịhazi ngwaahịa, wdg